Maitiro ekuisa Discord paLinux | Kubva kuLinux
Luigys toro | | Applications, GNU / Linux, Mitambo
Imwe yedzimba dzekukurumidza dzekukurukura dzemitambo iyo mune rekodhi nguva iri kuve inofarirwa nevatambi iri Kurwisana. Iyo ine nhamba huru yesarudzo, zviri nyore kushandisa, nekukurumidza, pamwe nekubatanidzwa kune akasiyana mapuratifomu emitambo, ... Kunyangwe iine rutsigiro rwemazhinji mapuratifomu, Discord paLinux haina rutsigiro ruzere uye iri muchikamu chekuyedza chete.
ari Discord vanogadzira ndakagadzira Linux rutsigiro chirongwa uye vakatoburitsa vhezheni yekuyedza inonzi 'Discord Canaryiyo inogona kuiswa uye kushandiswa pane akasiyana Linux distros. Izvo chaizvo hazvina kukwana, asi zvinoshanda mushe, uye kana iwe uri gamer wadii kuishandisa?
2 Isa Discord paLinux
2.1 Isa Discord pane Debian / Ubuntu
2.2 Isa Discord pane Fedora
2.3 Isa Discord pane OpenSUSE
2.4 Isa Discord pane Arch Linux
2.5 Isa Disord paGentoo
3 Mhedziso paDiscord paLinux
Kurwisana Ndicho Kushanda kweVoIP yakagadzirirwa nharaunda dzemitambo, iyo inobvumira kutaura uye kutumira mameseji pakati pevatambi, yakasununguka zvachose, yakachengeteka uye inoshanda mukati Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS uye web browser.
Iyi ndiyo imwe nzira yakanakisa kune inodhura TeamSpeak uye Ventrilo, pamusoro pekuve wakasununguka uye inoshanda kupfuura Skype, izvi maficha zvaita Discord yavo kusvika zvino vanopfuura mamirioni e26 vashandisi.
Isa Discord paLinux
Isa Discord pane Debian / Ubuntu
Iyo vhezheni 'Discord Canary'yakaiswa mukati meDebian-yakavakirwa kugovera. Vashandisi veDebian, Ubuntu, Mint, kana chero zvigadzirwa zvaro, havafanirwe kunge vaine dambudziko kurodha pasi iro .deb kubva paDiscord peji, iro raunogona kubva nekuisa neyako aunofarira package package. Unogona zvakare kutevera anotevera matanho:
Kana uchinge wapedza kurodha pasi, ingo gadza nayo dpkg.
Paunenge wapedza, unogona kumhanyisa iyo application, uye inogona zvakare kuvandudzwa nyore.
Isa Discord pane Fedora
Iko kune package yeFedora ye 'Discord Canary', iri mune yeCopr repository, uye inowanikwa kurodha pasi.
# dnf copr inogonesa vishalv / discord-canary # dnf kuisa discord-canary
Isa Discord pane OpenSUSE
Discord haina mapakeji eO OpenSUSE, asi iwe unogona kushandura zviri nyore maDebian mapakeji ne Alien script. Kune izvi unofanirwa kurodha pasuru .deb.
Wobva washandisa Alien kushandura iyo .deb a .rpm.
$ mutorwa -r -c kusawirirana-canary-0.0.8.deb
When Alien wapedza, isa pasuru ne Yast2.
# yast2 -i kusawirirana-canary-0.0.8.rpm
Iyi haisi mhinduro yakakwana, asi inoshanda painogadzira yemuno Discord mutengi weOpenSUSE.
Isa Discord pane Arch Linux
Kune mapakeji asina kufanira e 'Discord CanarymuAUR, iyo iwe yaunogona kuwana kubva kune inotevera url, https://aur.archlinux.org/packages/discord-canary/, unogona zvakare kurodha pasi ekuisa mapakeji kubva kuhttps://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/discord-canary.tar.gz. Muchiitiko ichocho unofanirwa kusunungura iyo tara, enda kune dhairekitori cd uye uvake nayo makepkg.
$ cd / nzira / ku / kusawirirana-canary $ mkpkg -sri
Isa Disord paGentoo
Iwe unogona kuwedzera iyo Discord kufukidza kune Gentoo uchishandisa layman.
Wobva wawedzera Discord kumashoko akagamuchirwa. In /etc/portage/package.accept_keywords
x11-misc / kusawirirana
Mushure meizvi, unogona kubuda sepakeji
# kubuda - bvunza x11-misc / kusawirirana
Mhedziso paDiscord paLinux
Discord paLinux ichiri chiyero chekuyedza cheiyi yakanakisa yekutaurirana chishandiso pakati pevatambi, inogona kunge iine zvikanganiso zvekugadzirisa, izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti zvinogadziriswa. Kunyangwe parizvino isiri iyo yakanakisa pane inotevera, inodarika sarudzo yekuvhura bhurawuza isu tichitamba, zvakare hauchazoda kushandisa Windows kuishandisa.
Saizvozvowo, chishandiso ichi chine maficha ese ekugona kutaura nevamwe vedu vatambi nemazvo, zvichiratidza kubatanidzwa nemaakaundi edu emitambo uye zvakare mukana wekugadzira maseva akazvimirira.
Neruzivo kubva LinuxConfig
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Maitiro ekuisa Discord paLinux
Wadiwa Luigys: Ini ndinofungidzira kuti vazhinji vaverengi vachange vachiona kuti DesdeLinux iri kutogadzirisa zvakasiyana kugoverwa muzvinyorwa zvayo. Makorokoto !.
Zvikuru, ini ndaitoda chimwe chinhu chakadai kuti ndikwanise kutamba Dota neshamwari dzakawanda. Mushure mechinguva ndinoiisa, ndatenda dzvinyu.
Isa vhezheni 0.0.15 mu openuse uye haitangi mushe: /, inoratidza kukanganisa, kana ndikaigadzirisa ndinotaura
Mhoroi, ndiri kuyedza kuisa kusawirirana paArch Linux (Manjaro KDE) uye pandinoisa yekupedzisira rairo "mkpkg -sri" inondiudza kuti "rairo haina kuwanikwa". Ndakaedza zvakare kuiisa kuburikidza ne octopi / pacman / yaourt asi zvese izvi zvinondipa dambudziko kuumbiridza ne libc ++.
Ndinovimba munogona kundibatsira uye nekutenda pamberi ... ^
Mario mey akadaro
Pane kanyaya kadiki naDebian 11 Bullseye. libappindicator1 haisisiri mune yekuchengetera. Vamwe vanhu vanokurudzira kushandisa libayatana sechinotsiva… asi ini handisati ndagona kuzviita. Chero ruzivo rwunobatsira kwandiri rwunozokosheswa.
Pindura kuna Mario Mey